Caamsaa 18, 2020
Prezdentii Keeniyaa, Uhuuruu Keeniyaattaa
Sanbata darbe Prezdentiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa Keeniyaan daangaa Taanzaniyaa fi Somaaliyaa waliin qabdu baballina Kooronaa hirrisuuf jecha cufuu ishee beeksisanii jiru. Keeniyaattaan yoo ibsan torbee darbe kana namootni Keeniyaa keessatti dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaaye 43 warra daangaa kana lamaaniin qaxxaamuree gara Keeniyaa seene ta’uu ifoomsan.
Keeniyaattaan, akka Koreen warra balaa biyyarraa qoluuf hundaaye gorsetti, Caamsa 16 harra irraa kaasee, daangaa Keeniyaa fi Taanzaaniyaa jidduu jiru qaxxaamuruun dhorkamuu, kana malees daangaa Keeniyaa fi Somaaliyaa jidduutis geejjiba kamiinuu nami qaxxaamuruun dhorkaa ta’uu ajaji darbee jira jedhan.
Keeniyaattaan ajaji kun konkolaachistoota warra konkolaataa fe’umsaa oofu hin ilaallatu, isaan qoratamanii dhukkuba kana hin qaban taanaan daangaa kana qaxxaamuruu danda’uu jedhan. Qorannaa Kooronaa torbee darbe Keeniyaan warra karaa daangaa kana lamaan gara Keeniyaa seenuuf ture taasiste keessaa 78 dhukkuba kanaan ka qabaman waan turaniif Keeniyaan seensa isaan dhowwachuus himani.
Dabalaniis ajaji sochii halkanii akka biyyaatti labsamee jiru, kkasumas Naayroobii dabalatee kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa ka Kooronaan itti baballate jedhame keessaa bahuu labsiin dhorkus torbee sadiitiif dheerachuullee beeksisanii jiru.
Keeniyaattaan dubbii isaanii sanbata darbeen waan daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa waanti dubbatan hin jiru; garuu Gaazexaan Keeniyaa qabiyyee siyaasaa gabaasuun beekamu ‘The Star’ Keeniyaan daangaa Itiyoophiyaa fi Sudaan Kibbaa waliin qabdus cufuu qabdi jechaan gabaasa barreessee jira.
Keeniyaatti harras namootni 23 dhibee Kooronaan qabamuu ka mirkanaaye yoo tahu, harrumallee 22 dhibee kanarraa fayyanii gara manaa yoo galan, Bitootessa jalqaba erga dhibeen kun Keeniyaatti mullatee as ammoo namootni 50 Kooronaan du’anii jiru.
Asmaraa Keessatti Qorannaa Vaayrasii Koronaa Jalqabamee Jira
Yaa Carraa Godaansaa ! Meeqatu Lafa Yaade Dhaqqaba?
‘Lammileen Jibuutii Itiyoophiyaa yoo dhufan Bilisa seenu, nuti Seensa fi Hojiif garuu Qarshii Hedduu Gaaftamna’
Dargaggoonni Magaalaalee Asoosaa fi Gaambellaa Ittisa Vaayirasii Koronaaf Qooda Isaanii Gumaachaa Jiran